Kubatsira Kubatsira Kubva kuSemalt - Nzira Yokusunungura Office Yako Kubva kuMarware
Kwemarudzi ose emabhizimisi kudzivirira malware ndeimwe yematambudziko makuru. Kudzivirirwa kwe data yako uye ruzivo runogona kuitwa nehuwandu hwezvirongwa uye software. Nekamwe makambani anotanga mawebsite uye mapeji ezvehupfumi, zvakave zvakakodzera kuti vadzivirire malware uye kurwisa kwetachiona. Zvinonyadzisira zvinoshandiswa kunotyisa software iyo inosanganisira spyware, mavairasi, scareware nezvimwe zvirongwa zvine ngozi.
Mazano anotevera, akarondedzerwa naMichael Brown, Mutengi Wekubudirira Kwemutengi we Semalt , anogona kukubatsira kudzivisa malware nemavhidhiyo zvikuru.
Shandisa zvipfeko zvakawandisa
Imwe yenzira dzinonyanya kukosha dzevanhu dzinoputika ndeyokuti dzinoshandisa zvinyorwa zvese uye nyore nyore - boat appraisal utah. Zvinonyanya kukosha kushandisa mashandisi epasiwedi uye kuchinja mavari nguva dzose. Iwe haufaniri kushandisa zita remhuka yako yemhuka, amai vako, baba, shamwari, kana zuva rokuzvarwa. Pane kudaro, iwe unofanirwa kushandisa zvishoma zvinyorwa gumi zvine musanganiswa wemashizha epamusoro uye ezasi uyewo nhamba. Kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako paIndaneti, unofanirwa kuchinja password yako kamwe kana kaviri pavhiki uye usachengetedza ruzivo rwako rwekugona rwakachengetedzwa pamakombiyuta yako.
Iva munhu ane njere surfer
Kune munhu wese ari kushandisa internet, zvakakosha kuva akachenjera uye akachenjera. Ngwarira paunoshanyira mawebsite. Nhamba dzakasiyana-siyana nehungano dzinogona kunge dzine malware uye mavairasi. Iwe haufaniri kuvhara pazvikwata zve-pop-up uye usambozarura zvinyorwa zve email..Paunenge uchishandisa mawebsite aunofarira, haufaniri kutora matanho nekutengeswa uye haufaniri kumbomira pazviri. Zvakanaka kuchengeta mupfungwa kuti dzakawanda dzepawebsite uye emaimiliro anovimbisa zvikwereti nemari mukudzoka kuongororo. Iwe haufaniri kunyengedzwa navo sezvavasina maturo.
Unofanira kugara uchitarisa uye uenzanise tsika dzako dzokudzivirira. Zvandiri kureva kutaura ndezvokuti iwe haufaniri kutora uye kuisa chero chinhu chinotaridzika chisina kuvimbika. Izvozvo ndechokuti vatengesi vanogara varipo kuti vape ruzivo rwenyu pachavo uye vanyore data yako. Zvinyorwa zvinowanzoshorwa nemavirusi uye malware zviri mawindo ep-up. Mamwe emafesti ekudhura anoudza vashandisi vavo kuti vaise uye vape zvinhu zvavo.
Ndiregei pano kuti ndikuudzei kuti vane virusi uye malware uye zvinogona kukutungamirira kuti utambure paIndaneti. Kana mumwe munhu akakukumbira kuti upedze ongororo, haufaniri kuita izvozvo sezvaunokwanisa kutarisa pane zvimwe zvinhu. Panguva imwecheteyo, haufaniri kumbomira pazvikwata zvepawebsite. Kungofanana nekutengeswa kunoonekwa kwakarurama hazvirevi kuti vakanaka kuenda navo. Kunyange mamwe maGoogle AdSense ads anogona kukonzera zvinetso zvekombiyuta kana chipangizo chako. Ndicho chikonzero iwe usingafaniri kuvhara pane zvekutengesa chero zvakakosha, kunyange kana mumwe munhu achikupa mari munyaya iyi.
Chimwe chirevo ndechokuti iwe haufaniri kukanda uye kuisa mitambo yepachena. For Candy Crush fans, the bad news is that the latest versions may contain viruses. Ndicho chikonzero iwe usingafaniri kukodhura mitambo iyi apo inowanikwa pasina mari. Pakupedzisira asi kwete zvishoma, chenjererai nevatambi vevhidhiyo sezvo vangave vane malware uye mavairasi. Hazvina kunaka kuisa vhidhiyo midziyo kubva kune zvisingazivikanwi. Pane kudaro, unogona kuikanda nekuisimudza kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamutemo kana dzechokwadi.